Xafsa C/caziiz – war wanaagsan ku hadal ama isakaba aamu
war wanaagsan ku hadal ama isakaba aamu
Waa intaasoo aadan soonka danbe gaarin!
Waxaa mar walba nasiib leh qofka bisha Ramadan gaara oo u dhalata asagoo caafimaad iyo nabad isku haysta. Waxaana kasii ayaan badan kan ka faaideysta ee qayrkeeda oo dhan hela. Kawaran qofkaas hadaa adiga iyo aniga nahay. Ma ciil baa qabtaa hadaa saas kaga tagto aduunyo.? Ilama ahan.
Noloshaan waxa kaliya ee la isku waafaqsanyahay gaal iyo muslimba waa geerida in la wada dhadhamin doono. Qof walba oo garaadkiisu shaqeynaayo wuxuu ka fikirayaa maxaa kala tageysaa aduunyo. Ramadan waa fursadaha ugu wayn ee aduunyada yaala. Sanadkaan hadii ay noogu dhalatay caafimaad iyo amaan waxaa nala gudboon inaa uga faa’deysano sida ugu mudan.
Sida ugu fiican waa soo xaadirinta niyada. Aan ku baraarugsanaano ficil walba oo aan sameyneeno bishaan barakeysan. Waa intaasoo aanan ka danbe gaarine. kan hanoo noqdo kii ugu fiicnaa ee abid nasoo mara.
Sida ugu fiican waxay ila tahay in looga faaideysto
1. Salaad badan : salaad walbo oo tukano soonka wee ka ajar badan tahay salaadihi hore. Kawaran hadaa tirada xitaa ka badino kuwii hore. Markaa cabaar joogtaba labo rakco iska xiro oo ilaahey kula sheekeyso.
2. Tusbaxa saxiib ka dhigo: wardiga aan laasimno oo aan joogteyno. markaa wax kale awoodin niyada ka tasbiixso.
3. Kitaabka wehel kadhigo: waa bishii lasoo dejiyay quraanka, aan u aqrino si kabadan sidii hore. Yool sameyso kadibna naftaada kula tartan iney gaadho yoolkaas.
4. Duco badan: shaki kuma jiro in ducada qofka sooman la aqbalaayo ee aan badino alle bariga iyo danbi dhaaf weydiisiga alle.
5. Wanaag sameyn: aan is farno oo faafino wanaaga. Xumaantana ka digno. Hadaanan ka hadli karin xitaa aan nafteena ka badbaadino. Xusuusnoow shaydaan kaa celinaaya ma joogo ee naftaada bis ka adkoow markaan.
Waa intaasoo soonka danbe aanan gaarine ilaahey aan u toobad keeno. Janooyinkiisana ka barino. Waxaa xaqiiqo ah cibaado aan sameynay ineynaan jano ku heli karin ee ilaahey naxariistiisa iyo fadligiisa iyo weynidiisa aan jano uga barino. Beri markaa dhimano yeynaan ku biirin qolada qoomamada iyo ciilka mudan doonta. Soonkan aan ka dhigano kii ugu fiicnaa ee abid nasoo mara waa intaasoo kii ugu danbeeyay noo noqdaaye.
Nala wadaag sidee ugu mudan oo aan uga faa’iideysan karnaa bisha Ramadan?
Posted byXAFSANIMO April 13, 2021 Posted inramadan, UncategorizedTags:Ramadan. soon wanaagsanLeave a comment on Waa intaasoo aadan soonka danbe gaarin!
Shantaan shay ha ka gorgortamin waligaa!
Waxaa jiraan wax yaabo badan oo nolosheena u ah muhiim ayna tahay inaan ku dhaganaano. Ayadoo aadan noqoneyn qof mayal adag hadana waxaa jira wax yaabo aan laga gorgortamin ama laga tanaasuli karin.
Halkaan hoose waxaa ku soo koobay shan shay oo kamid ah waxyaabaha ay tahay inaa mar walba ku adkeysatid ama aadanba soo saarin miiska wada hadalka.
1. Salaada: salaada waa shayga waajibka nagu ah ee hadana nolosheena sida joogtada ah ugu taxan. Maalinkii kaliya ayaa lagaa rabaa inaa shan jeer ilaahey hor istaagtid. Hadaa samayn. Weysid ciqaab adag baa mareysaa waa xaqiiqo aan daah saarneyn. Marba hadey saas kuu tahay maxaa kugu kalifaaya ineey noqoto wax aa sahlaneyso ama lagaa duufsan karo. Ka dhig salaadada iyo acmaasha waajibka ah mid aadan marnaba wada hadal ka furi karin. Si gaara marka dad aan salaada daneyn aad ku dhex jirto. Ahmiyada salaada muuji.
2. Xiriirka qoyskaaga: qoyska waa waxa ugu muhiimsan ee aad haysato. Waa hantida dhabta ah ee aduunyada aad ku leedahay. Waana dadka kaliya ee kula raba inaa guul gaadho. Wax kastoo idinku yimaadana ma noqoneysaan dad kala go’i kara marka calaaqada qoyskaaga ha ahaato mid ka horeysa calaaqada qof walba. Tix gali rayigooda iyo taladooda in kadan saaxiibada iyo dadka kale.
3. Ka run sheegida naftaada: adoo maya rabtid inaa dhahdid Haa ha isku qasbin hadhowna haka qoomameyn. Waligaana rayigaaga ha la gaban inaa cabirtid. Is ahow.
4. Qiima naftaada: marna ha qaadan waxaan kuu qalmin. haka yeelin qof inuu ku liido, ku xaqiro ama ku bahdilo. Naftaada adigey kuu soo hareysaa ugu danbeyn. Ha ogolaan inaa qoomamo iyo ciil iskula noolaato. Qofkaan kuu hayn qadarin intaa u haysoo kale wadada ku qulqul dheh.
5. In lagu maquuniyo: maquunisku waa in lagu qasbo ama lagugu cadaadiyo wax aan marnaba kuu cuntamin ama kuu qalmin. Ha ogolaan in lagugu qasbo inaa been sheegto, qof dulmiso, marqaati beenaale noqoto. Qof aadan jecleen inaa isku qasabtid iwm. Dareenkaaga gudaha ka imaanaya il hoose ku eeg.
Waa ku mahadsantahay aqriskaaga. Faalo inaatn ka duwan hadaa hayso noo reeb.
Posted byXAFSANIMO December 17, 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Shantaan shay ha ka gorgortamin waligaa!
Shantaan dhaqan hirgali hurdadda kahor!
Waa idin salaamay gacalayaal. Waayahaan waxba sooma qorin waa idinka raali galinayaa.
waxaa halkaan kusoo gudbinaayaa shan qodob oo aan u arkay iney tahay muhiim. Waa shan Caado ama dhaqan oo hadii aad sameysid aad is bedel naftaada ku arkeysid, maaha wax cusub oo qaarkiin iney dhaqan soo jireen ah u tahay baa laga yaabaa halka qaarna kalana ay xog ogaal u yihiin. Hadii aad ogtahy waa kuu bogaadin qormadaan hadii aadan ogeyna waa kuu talo iyo tusaalo.
HABEENKII INTAADAN SEEXAN KAHOR SAMEE
1. Korka wax dux leh marso sidoo kalana Rumayo hurdada : maqaarkaaga waxdux u yeela habeenkii mari si maalinka aad ula jaanqaado. Wax is Mariska dumar kaliya looguma talo galin raga xaataa waa iney jilifta iyo korka jacarta leh iska bi’yaan; nadaafada waa iimaanka badhkii, waxa ugu yar eed qaban kartid oo nadaafad ah samee intaada seexan, shayga ugu horeeya uguna muhiimsan waa cadeyga. Cadayo hurdada kahor. Dad badan baa ka shaleysan caafimaadka ilkohooda oo ay daryeeli waayeen maxaa yeelay habeenkii waa xiliga ugu badan ee isbedel ku dhoco afka iyo jirka oo dhan.
2.iska fogee aaladaha technology iyo korontada: intaada saaxan ugu yaraan saacad ka hor iska xidh mobile ka,Tvga iwm, u diyaari maskaxdaada xiligii hurdada in lagaaray. dad badan baa midaan ku baraarugsaneyn Latin wax yaabaha dhafarka iyo hurdo xumada keen waa qalabkaan technology ga ee aan indhaha ku hayno maskaxdiina nasiinada u diiday.
3. Habeen wanaagsan ku dheh dadkaa jeceshahay oo dhan: tan waa mida ugu fudud balse dhaqankeena oo qalafsan dartiis waxay u egtahay wax Adag, ku dheh Allaha nabariyo cidaada,iyo inta kula noolba. Laga yaabe ee inee tahay habenkii kuugu danbeeyay eed aduunka wada joogtaan. Marka war wanaagsan ku kala taga mar walba. Waa idin jeclahay hadaa ku tiraahdidna kaba sii fiican.
4. Wax aqri ama wax qor: xiliga hurdada jirka oo dhan wuxuu galaa xaalada degenaanshiyo, maskaxdaana inteysan hhurdada ka imaan waxay ku jirta xiliga ugu fiican ey fakarti karto ama wax
kaafahmi karto.hadey jiraan wax maskaxdaada kusoo dhaca markiiba qoro, buug iyo qalin agtaada haka dhawaadaan mar kasta.
5. Adkaar aqriso: habeenkii intaadan gam’in quraan aqriso ama is quraan saar duceyso oo ilaahey u bari sidiii iney tahay habeenkaaagi u danbeeyay aduun, ahaana moogid, ileen damaanad ma haysati inaa berri soo kacaysid. iska cafi ummada, ilaaheyna raali galin iyo mahadnaq dhab ah iskugu dar. Intaas kadib ashahaado adoo Muslim seexo.
Waxaan filaayaa wax bartood inaan kuusoo kordhiyay mowducaan hadii uu ahaa mid faa’iido leh. Waa ku mahadsantahay aqrintaada iyo soo booqashadaada.
Posted byXAFSANIMO November 18, 2020 November 18, 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Shantaan dhaqan hirgali hurdadda kahor!
Af ku waa gabaabsi!
Ma dareemeysaa in Afkeenu gabaabsi sii yahay?
Sidaan wada ogsoonahayba afka hooyo waa hodan, balse nasiib darada jiilkeena haysata ayaa ah ineynaan arkin hodontimadaas. Waxaa hubaa in Kadyka ereyada afka soomaaliga ay ka buuxaan erey bixino badan waliba laga soo helaayo erayo badan oo aan hadda aqoonin af soomaali waxa lagu dhaho.
Ma jiro meel mucayin ah oo lawada garanaayo oo loo doonto markuu qof erey u baahdo. Dugsiyadeena (Schoolada) oo ah Kuwii naga soo marin habaabiyay markii horaba uma diyaarsana sidaas. Xiisada ugu liita ee laga bixiyo goobeheena wax barashada af soomaaliga wuxu kaga jiraa safka hore. Wax xiiso iyo dhadhan ah oo loo yeeli jirey maleh.
Jiilkeena wax bartay dowlad la’aanta waxaa nahay kuwo jaha wareersan, waxaa nahay kuwo aan ku baahi bixi karin afkooda hooyo.
Waxaa arkeysaa qof weyn oo wax bartay maskax furan isla markaasna ay aqoontiisu ka ifiyeso, balse afka uu ku hadlaayo uu yahay wax af soomaali ka tagay af kale oo layaqaanana aan noqon. Balse Anaga waxaa naga sii nasiib daran kuwa imaan doona ama hada yaryar sababtoo ah intaan hada jirto hadaan la daba qaban waxay u imaan doonaan af soomaali la dhalan rogay ama la barxay.
Tusaale: sxp haween danpe chance ma hlayi lkn aan lawo maln kadip is khapano. 🙄 adi lee garo. Mustaqblka dhow ilmaha ku kora guriha afkaas looga hadlaayo Maxaa ka fileysaa inuu asna dhihi doono.
Sidii horey u jiri jirtayba markuu erey qalaad soo galo afkeenaa, markiiba waxaa jirey guddi dowli ah oo erey bixino cusub u sameyn jirey, kuwaasoo bulshada soo gaarsiin jirey. Hadda waxaas maleh. Hadey jirtana ma lihin goob lawada ogsoon yahay oo u doonan karno( hadey lacala jirto noo sheeg fadlan).
In badanoo nagama mida waxaan aaminsan nahay qoraalka af soomaaligu inuu yahay mid lagu caajiso. Magaran karo inee tahay shaqalada dhaadheer ama erayada aan kala go’i karin. Balse aan ka door bidno inaan af islaameed iskula hadlano. si kastey ahataaba afkaas af aan ahayn oo leenahay ma jiro waana masuuliyad iyo waajib nawada saaran inaan ilaalino, koley inteena badan wax kusoo kordhin meyno balse intaan yar ee hadda aan haysano aan sidii ugu sax saneyd ugu gudbino jiilka naga danbeeya.
Posted byXAFSANIMO July 20, 2020 Posted inUncategorizedTags:Afka hooyo, hodantinimada afka soomaaliga. af soomaaliLeave a comment on Af ku waa gabaabsi!
Shan kamida calaamadaha qaangaarnimada garaadka.
Dadku isku xili ma garaadsadaan, maankooduna iskumar ma qaangaaro.
Kuwaa da’dooda wax badan garaad ahaan ka weyn kuwa kalana wey ka yaryihiin intey jiraan. Hadaba waxaa jira sifooyin badan oo muujiya in qofku yahay qof garaadsaday oo caqligiisii buuxsamay. Halkaan waxaa idinkula wadaagayaa xooga ka mid ah sifada ama calaamada ay yeeshaan dadka maankoodu buuxsamay.
Qofka markuu caqliyeysto wuxuu ogaadaa
1. Iney aamusnaantu tahay wax fiican: hadalka badan waa lagu xikmad guuraa.
2. Qoyskaaga inuu yahay cida kaliya ee mudan in muhiimada la siiyo: dhiigu biyo maaha.
3. Inaa xiratid alaabo magac iyo qiimo sare leh ineysan qeexayn qofkaa tahay iyo heerkaa nolosha ka taagantahay.
4. Dadka rayigooda inuusan qeexeyn qofkaa tahay lakin rayigigaaga iyo ficilkaaga uu adiga kaa turjumayo
5. Mar walboo xeyndaabka dadkaagu yaryahay waa markastoo farxsantahay. Buuq iyo bulxana ka fogtahay.
Hadii aad dheeraad heyso inoo reeb.
Posted byXAFSANIMO July 9, 2020 Posted inUncategorized1 Comment on Shan kamida calaamadaha qaangaarnimada garaadka.
Shanta buug ee xulka ii ahaa lixdii bilood ee 2020 u horeysay
Salaama saaxiibayaal, waxaa jecleystay inaan idinla wadaago qayb kamida buugta aan akhriyay lixda bilood ee sanadkan 2020 kuwoodi iigu cajibsanaa islamarkaana saameyn igu yeeshay.
5. Love without limits: buugaan waxaa qoray qoraa reer Australia ah Nick Vujicic waa naafo ku dhashay gacmo iyo lugo la’-aan lakin aduunka tusay iney naafo nimadu tahay kartidaada ood dayacdo iyo awoodahaaga ood ka faaideysan weyaid.
Buugu wuxuu xambaarsanyahay cashar dhanka qoyska iyo jacaylka ah. Cashark ugu weyn ee uu xambaarsanyahay wuxuu yahay Iin walba oo aad leedahay qofbaa kugu qaadanayaa ee qofkaas il gaara ku fiiri adna. Sidoo kale qoyskaaga sii mudnaada koobaad
Sibaa iskaga dhex arkayay!
4. Eat that frog : buugaan waxaa qoray Brain Tracy, waa buug ka digaaya dib u gurashada ama is habsaaminta. Hadhow baa qaban! Kaliya kuuma sheegaayo ciladee wuxuu ku siinaaya xal iyo talooyin aad naftaada kaga bogsiin kartk cudurka wahsida. Waa buug ku dhahaya hada dhaqaaq soco qabo, dantaada garwsiyo waliba sida howlaha loo kala fududeeyo ayuu kuu sheegaaya. Runtii intaa aqrinaayay buugaa talaabooyin dhowr ah waa qaaday.
3. Ayuhal Walad: waxaa qoray imam Al gazhali allaha u naxariistee. Waa buuga labaad ee ka aqriyay imamkaas. Kan kale waxaa la dhahaa Bidaayat Al-Hidaaya waa buug kaloo fiican asna. Lakin kan baa aad uga heley. Asaga dhan waa waano socoto. Nuxurka u weyn ee uu xambaarsanyahayna waa noqo qof Muslim ah oo toosan. Af iyo adinba laga nabad galo, dantiisa garowsada, ilaaheyna ku xirnaada. Mar walba uu xikmad ama waano bilaabayana wuxuu ku bilaabayaa Ayuhal walad…
wuxuu aad ugu dardaarmaaya inaan laga quusan cilmi in laraadiyo.
2. Naxwaha af soomaaliga: buugan wuxuu ka mid yahay kuwa aan dib ugu laaban doono aqriskiisa waayo wuxuu ka hadlaayaa sida ugu sax san ee afka soomaaliga loo qoro, sidoo kale wuxuu ka qashaqeysiinaayaa maskaxdaada asagoo kuu diraya leyliyo af soomaali ah oo xiiso badan. Laga yaabee inaad garan weyso hadana waxay u egyihiin kuwo fudud waayo waa afkaagii hadana masoo qaban kartid ereygii. Aadbaa ugu raaxeystay buugaas intii aa aqrinayay. waa buug yar oo kooban lakin muhiim ah. Waxaad ka heleysaa makdaba onlineka ah ee Baraarug Library.
1. The 15 in-valuable Laws of growth : waxaa qoray John C Maxwell. Waa buuga aan u doortay kaalinta koobaad. Ilaa hada buug ka cajiibsan ima soo marin. 300+ pages ayuu ka koobanyahay hadana mid kama boodin intaa aqrinaayay. Bishaan june baa bilaabay waaana buuga aa kusoo xiray kala barka sanadka. Buugaan hadii la i dhaho sanadka asaga iyo mid kale bis ku cel cesho waa hubaa inaan ka caajisyeen. Kow wuxuu ku qoran yahay luuqad aad u fudud oo cid walbaa fahmi karto. Labo wuxuu ku siinaayaa dhowr talaabooyin oo kala duwan ood ku xalim karto hal masalo kaliya. Maskaxdaada ayuu bool bool ukala furaayaa wuxuuna ku shubaayaa wax walbo oo wanaag aad u baahneyd. Qarasta iyo waabayada dhan intuu kugu kiciyo buu ku siinaayaa waxaa iskaga dajiso. Mar walboo aqriyo waxbaa ii kordha, rayi baa helaa. Hada xitaa fikirkaan ah inaan idinla wadaago buugteyda xulka ah waxaa ka dhex heley buugaan. Waa idinkula talinaayaa inaad aqrisaan. Ana waa ku ceehaanaa insha allah.
Nuxur intaan kabadan waa idiin soo qori lahaaye fikirkaa degdeg iigu dhashay. June inteysan taariikhdu ka badlmin ka gaarsii baa is dhahay. Waa ku mahadsantahay aqriskaaga. Adigana ila wadaag kuwii ugu cajiibsanaa ee ilaa hada aad akhrisay sanadkaan.
Posted byXAFSANIMO June 30, 2020 June 30, 2020 Posted inUncategorized6 Comments on Shanta buug ee xulka ii ahaa lixdii bilood ee 2020 u horeysay
Wadaadka Maal qabeenka ah!
Waxaan ka qayb galay seminar online ah oo uu ku casuunaa ganacasade shiikh AxmedNuur Cali Jimcaale ( wadaadka magiciisu sida naanaysta oo kale u caan baxay). Ciwaanka uu ka hadlayay ayaa ahaa ‘Habka fursadaha loo baadi goobo iyo Tabaha loo baxnaaniyo ganacsiyada yar yar’.
Waxay ii ahayd markii u horeysay oo aan toos u arko isagoo meel ka hadlaaya. Horey filin xaata ugama daawan qoraalkiisana iskaba daa.
Intii aan dhageysanayay qudbadiisa waxaa iiga baxay sababta ganacsiyo badan oo soomalidu leedahay ay u guuldareystaan oo ay ugu horeeyaan hunguri badni, aqoon xumo, shaqaalaha oo aan la daryeelin lana dhiirigelin, dhiig miiradnimo iyo xalaasha oon la quudan. Wadaadka oo isla markaasna ah ganacsade dhaqaale badam sameeyay wuxuu is waafajiyay diintiisa iyo aduunyadiisa. Waxaan ka wadaa ganacsiga hadaa diinta ku saleyso ood la timaado dadaal adag hubaal waad ku guuleysaneysaa. Waxaa jirta Dhowr qodob uu ka dhawaajiyay ayaa iila muuqday guusha ganacsigiisa iyo wadada saxda ah ee la rabo inuu maro qofka ganacsadaha ah. Waxaa kamid ah
1. Alle kacabsi iyo talo saarasho rabi: qur’aanka hakuu noqdo marjica u danbeeya iyo kan u horeeya eed xal ka raadiso. Waa Hubaal inaa ka dhex heleysid xal, ilaaheyna waa balan qaaday midaas inuu ku waafajinaayo. Intaas waxaa dheer ganacsigaaga iyo dadkaa la dhaqmeysaba ilaahey uga baq. Xalaal miirad noqo, Ha noqon ganacsade bulshada dhiig miirta kaligii macaasha oo faaiido doon kaliya ah.
2. Rabitaan xoogan iyo dadaal: u shaqee si adag oo joogto ah hana is dhiibin. Wuxuu tusaale noo siiyay inuu shaqeen jiray 14 saac waliba si adag. Waa ii dhinaa qof soomaali ah oo intaasoo saacadood ganacsigiisa ka shaqeeyay.
3. Dad dhex gal: Wuxuu aad u xoojiyay in dadka la dhex galo, fursadaha la fiir fiiriyo lagana faa’iideysto. Bulsho la kasbado. Sahan joogto ahna la sameeyo, sidoo kale waaqica lala socodo. Ayadoo laga jawaabayo baahida macaamiisha. qodobkaan wuxuu ku sheegay inuu aad uga faaidey. Tusaale: Ganacsigiisa wuxuu xooga saara qancinta macmiilka. Halkaas oo ganacsiyo iyo shirkado badan oo dadkeenu leeyihiin ay ku liitaan.
4.Ganacsigaaga u dhiibo dad aqoon u leh isla markaana aamina: Shaqo walba qofkeeda u dhiib. Halkaas waxaa iiga soo baxay ha ina adeersan oo Qabiil ha fiirin markaad shaqada bixinayso.
5. Ha quusan: Tusaale wuxuu usoo qaatay markii xawaalada barakaat oo sahaqeyneysa ay dowladii somaaliya burburtay halmarna shaqdii istaagtay sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday markii shirkadii iyo bangigii barakaad oo dhanba Halmar albaabada loo laabay. Ismay dhiibin, ma quusan mana u joojine ayagoo cusub waa kuwa dib usoo noqday. Rug cadaagii soo rogaal celi.
Gunaanadkii, wadaadkaan lacagta Shiikh AhmedNuur Cali Jimcaale, waa wadaad faahin ku ah diinta, caqbri iyo xilkas ah, waaya araga sidoo kale ah rug cadaa & saameeye ganacsi. Mudana in dhinacyo badan looga daydo. Waxaan aaminsanahay iney nagu jiraan dad badan oo sidaasoo kale ah ayna mudan yihiin in bulshada loosoo saaro si looga faa’iideysto. Dadkeena nolosha qaybheeda kala duwan guusha ka gaaray saamayntana yeeshay hadii ay bulshada la hadlaan ama dhaxal dhigan u reebaan waxaa naga yaraan lahaa turaan turooyin badan.
Waxaan aad u bogaadinayaa bahda Murti Doon oo xubin kahay, sida ay bulshada ugu soo bixiyeen wadaaka maalqabeenka ah.
Posted byXAFSANIMO June 28, 2020 Posted inUncategorizedTags:kulanka Murti Doon2 Comments on Wadaadka Maal qabeenka ah!
Waxaan COVID-19 ka baranay.
Coronovirus saameyn intee le’eg buu kugu yeeshay? Waxay ila tahay Mid weyn! Saaneyntiisa guud iyo mida gaar ee caafimaad ka waxaa aad u dareemi kara ama fahmi og ciduu ku dhacay ama joogta dal uu si ba’an ugu baahay. Hadana Sidaas oo ay tahay wey yar tahay qof uu san dhibtiisa soo gaarin. Si toosan iyo si dad ban.
In badan oo naga mida waxay ku baraarug sanaayeen khasaaradiisa iyo dhibta uu geystay. Balse waxaa jira wax muhiim ah ay tahay in laga dhex barto.
1. Covid19 iyo guri joogu wuxuu na baray in 24ka saac ay tahay waqti badan oo inagu filan. Sababta illaahey noogu dooray na aan fahanay. Dad badan bey iskaga dhex yaaceen habeen ki iyo maalin kii (oo anigu ka mid ahay) lakin uu waqtigu u ahaa mid balaarnaa.
Waxaa jirtay Ayadoo Guriga lagu dhex shaqeeynay, waxna lagu baranaayay, In qofka usoo haraysay waqti badan.
covid19 kahor meel aan ku bixin jirnay iyo siduu nagu dhaafi jirey lama xisaabin jirin. Waqti ciriiri baa ka caban jirnay iwm. Balse hada xaqiiqada waxa noqotay in 24 saac ay tahay waqti nagu filan.
2. Guri joogu wuxuu na siiyay fursad aan ku baran karno nafteena. Waxaa soo baxday shaqsiyada dhabta ah ee qofka sidoo kale wixii uu qofku u kalihi jiray shaqo ama waxbarasho iney ahayd mid ku haboon rabitankiisa.
Waa wax fiican inaa nafteena waqti siino oo is xisaabino. Halkaa mustaqbalka rabno iyo jihadaan u aadi lahayn inaan u dhaqaaqno.
In badanoo naga mid ah uma helin fursad ay naftooda ku xisaabiyaan balse si khasab ah xiligaan adag ee guri jooga ayaa fursad noo siisay inaa nafeheena dib ugu noqono, oo is xisaabino. Hadey noqon lahayd aqoon kororsi,iyo xirfad cusub oo aad barato iwm.
3. Dhamaan noolaha koonka oo dhan waxaan uwada baahneyn waqti nasiino (break-time). Dadka, dhulka, xayawaanka iyo aaladaha aan isticmaalno, intaba waxay u baahnaayeen waqti aan ku degno oo ku nasano. Waxaa nastay dhulkii, hawadii wasaqoobi jirtay ee qiiqa sunta ahaa oo ku socdoy, xayawaanki dab jooga iyo duur jooga ahaa ee aharci darada loo leyn jirey. Aaladihi aa isticmaali jirnay oo ayagana heley waqti ey ku qaboobaan. Dadkii oo waqti isku heley, hadey noqon lahayd qoys wada noolaada iyo kuwo wada xidhiidha. Iyo qaar kaloo badan.
Isbarasho cusubna wey dhacday- character revealing.
4. Waxaa ogaanay in aadanuhu isku tabar yahay markey runta timaado. Dowladihii awooda ku faani jirey iyo kuwii awood yarida heysay iney isku si uga wada cawdeen xanuunka saf marka ah. Sidoo kale dadkii lacagta lahaa oo lacagtoodi ay badbaadin weysay. Kuwii magaca lahaa oo ayagana baxsan waayay. Halkaasna ay nooga soo baxday in awooda ilaahey aynaan marna baacsan karin. Ayna haboontahay mar walba inaan ilaahey swt isku dhiibno magan galyana weydiisano .
5. Inaan kayd lahaano. Waxaa jirta hadal caan ah ‘Barri baa darane baal reebo’. Adoon is qadin maantay beri iyo mustaqbalkaaga wax u dhigo. Kaydku wax kastuu noqon karaa, lacag ama cuno, daawo, sidoo kale caafimaadkaaga waa kaydsan kartaa.
6. Casharka u danbeeya ayaa ah in dunidu isku wada xirantahay isla markaana ay si fudud isku saameyn karto samaan iyo xumaanba.
Xaduudaha ey dhigteen dalalka ee kala celiya in eysan ka celin karinaafada wareegeysa. Waxaa run ah hadalkii ahaa ‘Dabka galbeed ka socda gondahaaga ka day’ . Sidaas si lamida waxaa xaqiiqo ah in la isku baahan yahayl Dadkuna kala maarmin. Wax kasto nolosha aad haystatid hadeysan dad ku jirin faaido badan kuuma sameyneyso.
Ma jiro qof kaligiis isku filan.
Posted byXAFSANIMO June 17, 2020 June 24, 2020 Posted inUncategorized2 Comments on Waxaan COVID-19 ka baranay.
Xaqiiqo intee leg baa ka taqaanaa nabiyada iyo rususha ilaahey soo direy?
Waxaa ii dhamaaday dhageysiga kitaab aan mudo soo waday ee qisas al anbiyaa oo uu qorey shiekh ibn kathir. waxaan idinla wadaagayaa inyaroo kaga faaloonayo.
Hadii aa ku maqashay nabi Yuusuf cs inuu ahaa noolaha kan ugu quruxda badan, nabi daauudna cs wuxuu ahaa noolaaha kan ugu codka qurxoon. Iyo inuu nabi idris ahaa qofkii koobaad ee wax qora. Hadii waqtiga qof walba uu haysto ay tahay 24 saac maalintii waxaa taariikhda soo maray nabi looga badiyay intaa, baryo uu ilaahey baryay darteedna ku heley fadligaas. Sidoo kale Mucjisoyinka tirada badan oo hadana kala dar daran ee nabi ciise la siiyay oo kala ahaa ah Aabo laan inuu dhashay kow, inuu yaraan ku hadlay ,inuu meydka soo nooleyn jirey, iyo inuu xanuunka daweyn jirey dhamaan asagoo idinka eebe ku daraya Ayaa sababtay in qowmkii waagaas inta wareereen asaga dhan ilaahey ka dhigteen. Alle magane.
Nabi walba fadli gaar ah buu leeyahay ilaaheyna swt Nabiyadiisa wuxuu usoo kala saaray siyaabo kala duwan. Lakin waxa kaliya uu kawada simay waa xikmad iyo aqoon. Umad walibana nabiga iyo rasuulka loo soo diray wey isu dhigmeen. Oo waxaa la siin jirey mucjiso iyo xikmad markaas la jaan qaadi karta casriga umadaaasi mareyso.
Marka laga yimaado in dhamaan anbiyada ay gudbinayeen hal fariin oo isku mid ah taasoo ah rumeynta ilaahey iyo maalinta qiyaame. Hadana nabi walba wuxuu maray marxalad ka duwan kuwa kale. Marka la fiiriyo qisada nabi muuse cs waa mid cashar weyn laga baran karo. Maaha kaliya inuu fircoon la dagaalmay iyo in saxaradii ugu waaweyneed uu ka yaabiyay ee waxaa aad layaab u leh in qoomkii markii hore taabacsana ee lagalay dagaalka ka dhanka ah fircoon ay markii danbe dib uga soo hor jeesteen. Nabi luud iyo qowmkii ugu fasahaadaanaa ee xitaa malaaiktii iney halaagto ugu Yimid uu damac ka galay oo iney xoogaan isku dayay. Samir badane asluub badane nabi ayuub oo mar qura caydh soo istaagay kadibna xanuun loogu daray baryo iyo istiqfaar badan kadib ilaahey usoo celiyay hantidiisi iyo awlaadiisi xanuunkiina laga qaaday. Waxaa xusid mudan boqortooyadii nabi suleymaan ee ugu weyneed sooyaalka aadanaha ee ayadoo kale aan dib loo arag. Cajiibsanaayaa oo nasiib badnaayaa nabigaas ilaahey wuxuu isugu daray madaxtinimo uu dhaxal ku heley iyo in loo saqiray adeegsiga noole aan insaan ahayn sida jinka iyo dabaysha.
Tan ugu cajiibsan waa in nabi muxamed csw uu kulansaday in badan oo kamida mucjisaadka iyo dhacdooyinka rusushii ka horeysay. Waqtiga yar ee uu dacwada waday ayuu la kulmay dhacdooyin badan oo u dhigma kuwii nabiyadii hore soo mareen.
Xiisaha uu xambaarsanyahay kitaabkaan qisas al anbiyaa maaha mid aan xagaan kusoo koobi karo ee waxaan kuusoo jeedin lahaa inaad ka wardoonto.
Waxaan kusoo gababeynaya shan xaqiiqo oo ay ka wada simanyihiin dhamaan nabiyada iyo rususha ilaahey soo direy.
1. Nabi walba wuxuu eebe u balan qaaday duco mustajaaba ah oo loo aqbali dooni. Badi way hormaraadeen ducafoodi ilaa Nabi muxamed maahee. Nabiga scw ducadiisa wuxuu udib dhigtay qiyaamaha oo uu noogu shafeeco qaadi doono.
2. Nabi walba oo ilaahey soo direy wuxuu ka digay fidnada masiixi dajaal.
3. Nabiyada oo dhan wexey ka hurdi jireen indhaha waxayna ka soo jeedeen qalbiyada.
4. Nabi walba wuxuu ku dhex tukadaa qabrigiisa.
5. Xirfada ay ka wada sinaayeen dhamaan nabiyada waxay ahayd ari raacida. Xikmada ku jirta ari raacdia ayaa ah in arigu uu ka dhib badan yahay xoolaha kale qofka raacaana uu ka samir badnaanaayo.
Posted byXAFSANIMO April 23, 2020 April 23, 2020 Posted inUncategorized2 Comments on Qisas al anbiyaa
Dabeecad wanaaga waxaa laga dhaxlaa
6. Danbi yari
Hadaba see lagu helaa dabeecad wanaag.
Adoon u dhalan inaa dabeecad fiicantahay hadana waa la bartaa waana la noqon karaa qof dabeecad fiican.
1. Laab xaarnaan. Inaa niyadaada ka dhigtid mid barax ah oo ka hufan xiqdi, xaasidnimo iyo xumaan filasho oo dhan. Inaa niyadaada boos wayn ka siisid samaan ka filashada.
2. cafis badan. Iska cafi cid walboo dhib kuu geystaa. Waayo cuqdadu waxay miisaan badan oo culees ah ku haysaa qalbiga. Ciriir iyo cakirnaan oo dhan niyadaada ka saar.
3. Hadal yar. Isku day inaaa ku hadasho Hadal kooban oo run ah. Uma baahnaysid sharaxaad badan iyo erey erey ku kab.
4.dhoola cadeyn. Saldhiga dabeecad wanaaga waa dhoola cadeyn. Dabinka dad kasbashadu waa dhoola cadeynta. Dibnahaaga wax yar kala jiid markaa qofka salaamayo.
Ma jiro qofku mar uu ka qurux iyo soo jiidasho badan yahay markuu dhoola cadeynaayo.
Ha is dhihin waa u dhalasho dabeecad wanaaga anigana uma dhalan. Iyadoo dad badan u dhasheen ayay hadana garaneyn sida looga faaideysto iyo muhiimadeeda.
Marka hadaa faaidada dabeecad wanaaga ogtahay si fudud waa ku baran kartaa sida loo yeesho.
Waxaan rajeynaa Wax bartoood inaa kuu soo kordhiyay.
Posted byXAFSANIMO February 18, 2020 March 27, 2020 Posted inUncategorized1 Comment on Dabeecad wanaaga
Xafsa C/caziiz, Create a free website or blog at WordPress.com.